कोरियाबाट अनुहार देखाउन लाज हुने फट्याँइ गरेर भागे भारतिए प्रोफेसर, हेरौं के गरेछन त? – Eps Sathi
कोरियाबाट अनुहार देखाउन लाज हुने फट्याँइ गरेर भागे भारतिए प्रोफेसर, हेरौं के गरेछन त?
December 8, 2021 1693
दक्षिण कोरियाबाट एक भारतिय प्रोफेसरले लाजमर्दो हर्कत गरि भागेका छन। कोरियाको प्रतिष्ठित सउल नेशनल युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर रहेका उनले करिब १० करोड कोरियवन वन बराबर रकम घोटाला गरि कारबाहि हुने डरले भारत भागेका छन। रिसर्च फण्डको यति ठूलो रकम घोटाला गरेपछि उनि छानविनमा तानिएका थिए। छानविनकै क्रममा कारबाहि हुने डरले ति भारतिय प्रोफेस कोरिया छाडेर भागेका हुन।
उनको केश छानविनका क्रममा रहेको थियो तर छानविनकर्ताले उनलाई कोरिया छाड्न बन्देज लगाउन भुल्दा उनि उम्किन भ्याएका हुन। दक्षिण कोरियका स्थानिय सन्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिए अनुसार उनि कोरियाकै प्रतिष्ठित मध्येको एक सउल नेशनल युनिभर्सिटीको ग्राजुएट स्कुल अफ डेन्टिष्ट्रीमा प्रोफेसर थिए। गत ४ बर्षदेखि अर्थात सन २०१३ देखि नै रिसर्च फण्डको रकम हिनामिना गरि घोटाला गरेपछि उनि अनुसन्धानको घेरामा तानिएका थिए।
उनको यो केशलाई सन २०१८ को मार्च महिनामा एन्टी करप्सन एण्ड सिभिल राइटस कमिसन (एसीआरसी) मा पठाईएको थियो। एसीआरसीले यो केशलाई गत बर्षको अगष्ट महिनामा कोरियाको शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान तथा आइसिटी मन्त्रालयमा पठाएको थियो। एसिआरसीले यो केशको रिपोर्ट सम्बन्धित एजेन्सीहरुमा पठाई निष्कर्क्ष निकाल्ने क्रममा रहेको थियो। तर ति भारतिय प्रोफेसर भने आफूले गरेको गल्तिबाट अब नजोगिने भइयो भन्ने लागेपछि फरार भएको बताइएको छ।
ति भारतिय प्रोफेसरले आफ्ना ग्राजुएट विध्यार्थीहरुबाट ठूलो मात्रामा पैसा लिने गरेको तथा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई रिसर्चरका रुपमा राखेर तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी रिसर्च ल्यापको रकम समेत उनले आफ्नो ब्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। यि विभिन्न तरिकाहरुबाट उनले १ करिब १२ करोड कोरियन वन हिनामिना गरेको भेटिएको छ। उनको अण्डरमा रहेर रिशर्चमा सहभागी हुनेले पाउने गरेको १६ लाख देख १८ लाख वन मध्ये विध्यार्थीले मात्रै ४ लाख वन पाउने र बाँकी ति प्रोफेसरले फिर्ता लिने गरेको भेटिएको छ।
त्यसैगरी उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरुलाई पनि झुटो बिवरण पेश गरी रिसर्चरका रुपमा उभ्याई तलब बुझ्ने गरेका थिए। उनले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई यसरी मासिक ३० लाख वन तलब खुवाउने गरेको भेटिएको छ। उनि सन २०१९ मा तलबि विदा मागि भारत गएका थिए। तर त्यसपछि उनि भारतबाट फर्केनन। लामो समय सम्पर्क विहिन भएपछि सउल नेशनल युनिभर्सिटीले गत बर्षको नोभेम्बरमा उनलाई पदबाट निष्कासन गरेको थियो।
Prevकोरियामा भिजा सकिन लागेका कामदारहरुको भिजा १ बर्ष थप हुने, हेरौं क कसको थपिन्छ?
Nextट्युसन पढाउन घरमा बोलाइएकी शिक्षिकाले विध्यार्थीसँग यौ’न सम्बन्ध राखेपछि ५ बर्ष जेल सजाय माग
कोरियाको विदेशी मुद्रा सञ्चिती अहिलेसम्मकै उच्च
जापानको राजधानी टोकियो विश्वकै वस्नयोग्य शहरको चौथो नम्मरमा पर्न सफल
विदेशमा बस्ने नेपालीले हुण्डीको प्रयोग गरिदिँदा अप्ठ्यारोमा पर्यो नेपाल सरकार